Asan'ny Apostoly – 2trondro
Home / Baiboly / Asan'ny Apostoly
Ny Asan'ny Apostoly hita ao amin'ny toko izay Hitanisa ity pejy ity. Izy ireo tsara “slugs” toy ny /bible/acts/ch-1. (Izahay momba ny antenatenan'ny ho nanasaraka ny toko toy ny 11-28 hita ao Ch 11.) Na izany aza, ny boky iray manontolo no aseho eto ambany, koa.
1:1 tokoa, O Theophilus, I namorona voalohany lahateny momba ny zava-drehetra fa i Jesoa dia nanomboka sy nampianariny,
1:2 mampianatra ny Apôstôly, izay nofidiny tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina, na dia mandra-pahatongan'ny andro izay dia nakarina.
1:3 Koa izy niseho velona ho azy ireo, taorian'ny Passion, niseho taminy efa-polo andro sy mandritra niresaka momba ny fanjakan 'Andriamanitra miaraka amin'ny maro elucidations.
1:4 Ary nisakafo tamin'izy ireo, Nandidy azy ireo izy mba tsy hiala an'i Jerosalema, fa mba hiandry ny teny fikasan'ny Ray, "Momba izay efa renareo," hoy izy, "Avy ihany ny vavako.
1:5 Fa Jaona, tokoa, batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, tsy afaka andro vitsivitsy. "
1:6 Noho izany, ireo izay nivory nanontany azy, nanao hoe:, "Tompo ô, izao ny fotoana rehefa hampodiko avy amin'ny fanjakan'ny Israely?"
1:7 Fa hoy Izy taminy:: "Tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana, izay napetraky ny Ray eo amin'ny fahefana.
1:8 Fa ianao kosa dia handray ny herin 'ny Fanahy Masina, mandalo anareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema ho ahy, sy eran'i Jodia sy Samaria, ary hatramin'ny faran'ny tany. "
1:9 Ary rehefa nilaza izany, raha mbola nijery, dia nanandratra, ary nisy rahona naka azy avy eo imasony.
1:10 Ary raha mbola nijery azy miakatra ho any an-danitra, indro, nisy roa lahy teo akaiky azy ireo amin'ny fitafiana fotsy.
1:11 Ary hoy izy ireo:: "Ry lehilahy galilianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra? izany Jesosy, izay efa niala taminareo ho any an-danitra, miverina fotsiny, toy ny efa nahita azy miakatra ho any an-danitra. "
1:12 Ary izy ireo niverina tany Jerosalema, rehefa avy teo an-tendrombohitra, izay atao hoe Oliva, izay akaikin'ny Jerosalema, ao anatin'ny iray lalana indray sabata.
1:13 Ary rehefa niditra tao an-cenacle, dia niakatra ho any amin'ilay tany nanaovan'i Petera sy Jaona, Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Simona Zelota, ary Joda ny James, nitoetra.
1:14 Ireo rehetra ireo dia maharitra niray saina nivavaka mbamin'ny vehivavy, sy Mary, ny renin'i Jesosy, ary ny rahalahiny.
1:15 Ary tamin'izany andro izany, Peter, nitsangana teo afovoan'ny rahalahy, nanao hoe: (ankehitriny ny vahoaka ny lehilahy avokoa teo tokony ho roa-polo amby zato):
1:16 "Noble rahalahy, ny Soratra Masina dia tsy maintsy ho tanteraka, izay ny Fanahy Masina mialoha ny vavan'i Davida momba an'i Jodasy, izay ny mpitarika 'ireo izay nahazo an'i Jesosy.
1:17 Izy efa isantsika, ary izy no voafidy araka ny filokana noho izany fanompoana.
1:18 Ary izany lehilahy izany tokoa nanana fananana avy ny tambin'ny heloka, ary noho izany, rehefa nahantona, dia vaky ny afovoany sy ny taova rehetra tao anatiny kosa nanidina ny diloilo.
1:19 Ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema, ka dia saha io dia nantsoina amin'ny fiteniny, Akeldama, izany hoe, 'Sahan-drà.'
1:20 Fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo: 'Aoka ny fonenana ho lao, ary mety tsy hisy izay monina ao aminy,'Ary' Aoka ho lasan'olon-kafa ny eveka. '
1:21 Noho izany, dia ilaina ny, avy ireo lehilahy ireo, izay efa mivory aminay nandritra ny fotoana iray manontolo fa Jesosy Tompo niditra sy nivoaka tamintsika,
1:22 hatramin'ny batisan'i Jaona, mandra-pahatongan'ny andro nampiakarana Azy niala tamintsika, anankiray amin'ireny ho vavolombelona amintsika ny Fitsanganany ho velona. "
1:23 Ary nanokana roa lahy: Joseph, izay atao hoe Barsabbas, izay atao hoe koa Josto, ary Matia.
1:24 ary mivavaka, hoy izy ireo: "Enga anie ianao, Tompo O, Izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, hita izay ny iray amin'izy roa lahy ireto nofidinao,
1:25 handray ny toerana amin'izao fanompoana sy ny mah'Apostoly, izay Jodasy prevaricated, koa mba hankanesany any amin'ny fitoerany. "
1:26 Ary nanao filokana ny momba azy ireo, ary ny filokana latsaka tamin'i Matia. Ary izy no lany ho isan'ny Apostoly iraika ambin'ny folo lahy.
4:1 Fa raha mbola mbola niteny tamin'ny vahoaka, ny mpisorona sy ny mpanapaka ny tempoly ary ny Sadoseo manafotra azy ireo,
4:2 fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny Apostoly ny vahoaka sy ny fanambarana an'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty.
4:3 Dia nisambotra azy, ka napetrany eo ambany fiambenana mandra-pahatongan'ny andro manaraka. Fa efa hariva ny andro.
4:4 Nefa maro ireo izay efa nandre ny teny no nino. Ary ny isan'ny lehilahy lasa dimy arivo.
4:5 Ary nony tamin'ny andro manaraka fa ny mpitondra sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna niangona tany Jerosalema,
4:6 anisan'izany Anasy, ny mpisoronabe, sy Kaiafa, sy Jaona sy Aleksandro, ary izay avy tamin'ny mpisorona fianakaviana.
4:7 Ary Mijoro azy ireo eo afovoany, dia nanontany azy: "Fahefana manao ahoana, na amin'ny anarany, ianao no nanao izany?"
4:8 Ary Petera, feno ny Fanahy Masina, hoy izy taminy: "Mpitarika ny vahoaka sy ny anti-panahy, mihaino.
4:9 Raha amin'izao andro izao dia tsarain'ny tsara ny zavatra natao ho osa lehilahy, araka izay efa sitrana,
4:10 dia aoka ho fantatry ny rehetra ny anareo sy ny rehetra ny olona Isiraely, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika avy any Nazareta, izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, Izay efa nitsangana tamin'ny maty, aminy, io lehilahy mitsangana eo anatrehanao, salama.
4:11 Izy no vato, izay nolavin'ny anao, ny mpanao trano, izay efa tonga fehizoro.
4:12 Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona, izay tsy maintsy ho antsika mba ho voavonjy. "
4:13 Avy eo, nahita ny tapaka an'i Petera sy Jaona, rehefa voamarina fa izy ireo dia olon tsy misy taratasy na ny fianarana, nanontany tena izy ireo. Ary fantany fa efa niaraka tamin'i Jesosy.
4:14 koa, nony nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy, dia tsy afaka milaza na inona na inona manohitra ny azy ireo.
4:15 Nandidy azy ireo anefa izy ireo mba hiala ivelany, lavitra ny filan-kevitra, ary izy ireo dia niara-nisaina,
4:16 nanao hoe:: "Hataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa tokoa famantarana ho an'ny daholobe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy, eo anatrehan'ny mponina rehetra any Jerosalema. Zava-miseho, ka tsy azontsika lavina.
4:17 Nefa andrao tsy hielezan'izany bebe kokoa eo amin'ny vahoaka, aoka mandrahona azy tsy hiteny amin'izany anarana izany intsony ny olona. "
4:18 Ary niantso azy ireo amin'ny, dia nampitandrina azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy.
4:19 Na izany aza tena, I Petera sy Jaona efa nilaza ho valin'ny azy ireo: "Tsarao na marina eo imason'Andriamanitra, mba hihaino anao, fa tsy ho an'Andriamanitra.
4:20 Fa isika tsy afaka mifehy tena tsy hiteny izay zavatra efa hitanay sy renay. "
4:21 anefa izy ireo, mandrahona azy ireo, nalefany hody izy, rehefa tsy hita ny fomba izay hitany izay hampijaliany azy noho ny vahoaka. Ho an'ny rehetra, dia nankalaza ny zavatra izay efa natao tany ireo zava-niseho.
4:22 Fa ny lehilahy izay nanana izany famantarana ny fanasitranana efa tanteraka dia mihoatra ny efa-polo taona.
4:23 Avy eo, fa efa navoaka, dia lasa nankany amin'ny taniny, ary dia nilaza tamin'ny an-zavatra ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona nanao taminy hoe:.
4:24 Ary nony efa nandre izany, niray, dia nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra, ka hoy izy:: "Tompo ô, Hianao no Ilay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy,
4:25 izay, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ny alalan 'ny vavan'i Davida raintsika, mpanomponao, nanao hoe:: 'Nahoana ny jentilisa efa anjakan'ny, ary nahoana no ny olona nisaintsaina misy dikany?
4:26 Ireo mpanjakan'ny tany efa nitsangana, sy ny mpanapaka dia tafakambana ho iray, Hanohitra an'i Jehovah sy amin'ny Kristy. '
4:27 Fa marina tokoa Heroda sy Pontio Pilato, mbamin'ny jentilisa sy ny olona Isiraely, nivory teto amin'ity tanàna ity hanohitra ny Mpanomponao Masina Jesosy,, izay voahosotra
4:28 hanao izay ny tananao sy ny torohevitra Efa nilaza mantsy hatao.
4:29 Ary ankehitriny, Tompo O, jereo ny fandrahonany, ary omeo anay mpanomponao ny mba hilaza ny teninao amin'ny fahasahiana be,
4:30 amin'ny alalan'ny fanolorana ny tananao amin'ny fanasitranana sy ny famantarana sy fahagagana, tokony hatao amin'ny anaran'i masina Zanaka, I Jesosy. "
4:31 Ary rehefa nivavaka, ny toerana izay nivory izy ireo dia nihorakoraka. Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina. Ary nitory ny Tenin'Andriamanitra amim-pahatokiana.
4:32 Ary raha maro ny mpino dia iray fo sy fanahy iray. Fa tsy nisy na iza na iza milaza fa izany ny amin'izay zavatra izay dia nahazo ny, fa ny zavatra rehetra dia fahita ho azy ireo.
4:33 Ary tamin'ny hery be, ny Apôstôly dia mamaly fijoroana ho vavolombelona ny Fitsanganan-ko velona an'i Jesoa Kristy Tompontsika. Ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra.
4:34 Ary tsy nisy olona teo anivony mila fanampiana. Fa na iza no tompon'ny tany na trano, nivarotra izany, dia nitondra ny vola ny zavatra izay nivarotra,
4:35 ka mametraka azy eo anoloan'ny tongotry ny Apostoly. Avy eo dia nizara roa toko ny olona rehetra, araka izay nilainy avy.
4:36 Ary Joseph, izay ny Apostoly hoe koa Barnabasy (izay adika hoe 'Zanaky ny fananarana'), izay Levita avy any Kyprosy taranaka,
4:37 satria nanan-tany, nivarotany azy, Ary nitondra ny vola ary nametraka izany teo an-tongotry ny Apostoly.
5:1 Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy, amin'ny vadiny Safira, nivarotra saha,
5:2 ary izy dia mamitaka ny vidiny any an-tsaha, niaraka tamin'ny vadiny ny faneken'ny. Ary nitondra ihany no anisan'izy io, nentiny ho eo teo an-tongotry ny Apostoly.
5:3 Fa hoy Petera:: "Ananiasy, nahoana Satana no naka fanahy ny fonao, mba ho handainga amin'ny Fanahy Masina ka ho mamitaka ny momba ny vola sasany vidin'ny tany?
5:4 Tsy nataonareo an'i anao dieny mbola nihazona izany? Ary rehefa nivarotra izany, Moa tsy amin'ny hery? Nahoana ve ianao, izany zavatra izany ao am-ponao? Efa Tsy nandainga tamin'olona, fa ho an'Andriamanitra!"
5:5 Ary Ananiasy, rehefa nandre izany teny izany, dia nikarapoka, ka afaka ny ainy. Ary nisy tahotra lehibe reraka izay rehetra nandre izany.
5:6 Ary ny zatovo nitsangana ka nanaisotra an'i Saoly; ary nitondra azy ho eny ivelan'ny, nalevina.
5:7 Ary tokony ho ora telo no lasa, sy ny vadiny niditra, nefa tsy fantany izay efa nanjo.
5:8 Ary hoy Petera taminy:, "Teneno aho, vehivavy, raha nivarotra an-tsaha ho an'ity vola?"Ary hoy izy:, "Eny, fa vola. "
5:9 Ary hoy Petera taminy:: "Nahoana ianareo no niray tetika haka fanahy ny Fanahin'ny Tompo? Indro, an-tongotr 'ireo izay efa nandevina ny vadinao eo am-baravarana, ary hitondra anareo hiala!"
5:10 avy hatrany, dia niankohoka teo an-tongony ka tapitra ny ainy. Dia niditra ny zatovo, dia hitany fa maty. Ary nentiny nivoaka ka naleviny teo akaikin'ny vadiny.
5:11 Ary nisy raiki-tahotra mafy ny Fiangonana manontolo mbamin'izay rehetra nandre izany.
5:12 Ary ny alalan 'ny tanan' ny Apôstôly maro famantarana sy fahagagana no vita teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra niray saina nihaona amin'ny lavarangana fidirana Solomona.
5:13 Ary teo anivon 'ny olon-kafa, tsy nisy sahy niray taminy. Fa nankalaza azy ny vahoaka.
5:14 Ary ny hamaroan'ny lehilahy sy vehivavy izay nino ny Tompo dia mbola mitombo,
5:15 loatra ka nametraka ny osa eny an-dalambe, mametraka azy ireo ao amin'ny fandriana sy ny filanjana, amin'izay mba, toa an'i Petera tonga, fara faharatsiny, ny aloka mety hamely misy iray amin'izy ireo, ary izy ireo ho afaka amin'ny aretiny.
5:16 Fa ny vahoaka ihany koa haingana tany Jerosalema avy tamin'ny tanàna manodidina, nitondra ny marary sy ny nampahorin'ny fanahy maloto, izay sitrana avokoa izy rehetra.
5:17 Ary tamin'izany ny mpisoronabe sy izay rehetra niaraka taminy, izany hoe, ny nanda ny finoana katolika antokon'ny Sadoseo, nitsangana, fa feno fialonana.
5:18 Ary ny olona naninjitra tanana ny Apôstôly, ka nametraka azy tao an-trano-maizina.
5:19 Fa amin'ny alina, nisy anjelin'ny Tompo namoha ny varavaran'ny trano-maizina, ary nitondra azy, nanao hoe:,
5:20 "Mandehana, ka mijoroa ao amin'ny tempoly, niteny tamin'ny olona izany teny rehetra izany eo amin'ny fiainana. "
5:21 Ary nony efa nandre izany, dia niditra ny tempoly tamin'ny voalohany hazavana, ka dia nampianatra. Ary tamin'izany ny mpisoronabe, sy ireo izay niaraka taminy, nanatona, ka dia novorina ny Synedriona sy ny loholona rehetra amin'ny zanak'Israely. Dia naniraka tany amin'ny fonja mba ho azy ireo nitondra.
5:22 Fa rehefa tonga ireo mpanompo efa, ary, eo am-piandohan'ny lahatsoratra an-tranomaizina, tsy nahita azy, dia niverina izy ka nilaza tamin'izy ireo,
5:23 nanao hoe:: "Hitanay tokoa ny fonja voahidy izay rehetra tokony hotandremana, ary ny mpiambina nitsangana teo am-baravarana. Fa eo am-piandohan'ny lahatsoratra izany, izahay, dia tsy nahita olona tao izahay. "
5:24 Avy eo, raha ny mpanapaka ny tempoly sy ny lohan'ny mpisorona, rehefa nandre izany teny izany, izy ireo tsy azo antoka ny momba azy ireo, toy ny inona no tokony hitranga.
5:25 Fa misy olona tonga ka nilaza taminy, "Indro, ny olona izay napetraka tao an-tranomaizina no an-kianjan'ny tempoly, nitsangana teo ka mampianatra ny olona. "
5:26 Dia ny mpitsara, ny mpanompon'ny, nandeha ka nitondra azy tsy misy hery. Fa natahotra ny vahoaka, fandrao hotorahany vato.
5:27 Ary rehefa nitondra azy, dia nitsangana teo anatrehan'ny Synedriona. Ary ny mpisoronabe nanontany azy,
5:28 ka nanao hoe:: "Mandidy mafy anao izahay mba tsy hampianatra amin'izany anarana izany. Fa, indro, Nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema, ary maniry ny hitondra ny ran 'ity lehilahy ity eo amintsika. "
5:29 Fa Petera sy ny Apostoly namaly tamin'ny hoe:: "Tena ilaina ny mankatò an'Andriamanitra, kokoa izany mihoatra noho ny olona.
5:30 Andriamanitry ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy, izay novonoiny nahantony teo amin'ny hazo.
5:31 Izy no Andriamanitra izay efa nanandratra eo ankavanany ho Mpitondra sy Mpamonjy, mba hanatitra ny fibebahana sy ny famelan-keloka ho an'ny Isiraely.
5:32 Ary izahay dia vavolombelon'izany, ny Fanahy Masina, Izay efa nomen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mankatò azy. "
5:33 Ary rehefa nandre izany, izy ireo naratra mafy, ka dia nikasa ny hamono azy ireo ho faty.
5:34 Fa olona iray teo amin'ny Synedriona, ny Fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna nalaza teo amin'ny olona rehetra, nitsangana ka nandidy ny olona mba hatao fohifohy ivelany.
5:35 Ary hoy Izy taminy:: "Ry Israelita, dia tokony hitandrina amin'ny fikasany momba ireo olona ireo.
5:36 Fa talohan'izany andro izany dia, Theudas nanatona, milaza ny tenany ho olona iray, ary maro ny olona, tokony ho efa-jato, niaraka taminy. Fa nisy namono, ary izay rehetra nino Azy niparitaka, ary izy ireo dia nahena ny na inona na inona.
5:37 Rehefa afaka izany, iray, Jodasy ilay Galiliana nanatona, tamin 'ny andron' ny fisoratana anarana, ary dia nitodika ny vahoaka amin'ny tenany. Fa izy koa maty, ary izy rehetra, izay rehetra efa niaraka taminy, dia niparitaka.
5:38 Koa noho izany dia, Lazaiko aminareo, hiala amin'ireo olona ireo ka avelao ihany. Fa raha izao saina na asa ny olona, dia ho tapaka.
5:39 Na izany aza tena, raha avy amin'Andriamanitra, dia tsy ho afaka handika izany, ary angamba mety ho hita fa niady nanohitra an'Andriamanitra. "Dia nanaiky azy.
5:40 Ary niantso tao amin'ny Apôstôly, Efa nokapohiny tsy azy ireo, dia nananatra azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nalefany izy ireo.
5:41 ary tokoa, dia nivoaka avy teo anatrehan 'ny filan-kevitra, faly, satria natao mendrika ny hijaly noheverina faniratsirana amin'ny anaran'ny ny anaran'i Jesosy.
5:42 Ary isan'andro, an-kianjan'ny tempoly sy tany amin'ny trano, dia tsy nitsahatra nampianatra sy hitory ny filazantsara Kristy Jesosy.
7:1 Ary ny mpisoronabe hoe:, "Moa izany tokoa?"
7:2 Ary hoy Stefana: "Noble rahalahy sy ianareo ray, mihaino. Andriamanitry ny voninahitra niseho tamin'i Abrahama razantsika, raha tany Mesopotamia, fony izy tsy mbola nitoetra tany Harana.
7:3 Ary hoy Andriamanitra taminy, 'Mialà amin'ny taninao sy amin'ny havanao, ka mandehana any amin'ny tany izay hasehoko anao. '
7:4 Avy eo dia niala avy any amin'ny tanin'ny Kaldeana, ary nonina tany Harana. ary taty aoriana, rehefa maty ny rainy, Nentin'Andriamanitra teo izy hankany amin'ny tany, izay ianao ankehitriny monina.
7:5 Ary tsy nomeny lova teto izy, na dia nandritra ny dingana iray. Fa nolazainy homena azy izany ho fananany, sy ho an'ny taranany mandimby azy, na dia tsy hananany zanakalahy.
7:6 Ary hoy Andriamanitra nilaza taminy fa ny taranany dia ho mpiavy tany an-tanin'olona, ary izy ireo hifehy azy ireo, ary hitondra azy ireo mafy, efa-jato taona.
7:7 'Nefa ny firenena izay hotompoinareo, Izaho no hitsara,'Hoy ny Tompo. 'Ary rehefa afaka izany,, dia hiala ka hanompo Ahy eto amin'ity toerana ity. '
7:8 Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy. Ary ka dia nanan'anaka Isaka ary namora azy tamin'ny andro fahavalo. Dia nanan-anaka Isaka an'i Jakoba, ary Jakoba, ny roa ambin'ny folo lahy Razamben'ny Jiosy.
7:9 Ary ny Razamben'ny Jiosy, ho saro-piaro, nivarotra an'i Josefa ho any Egypta. Nefa Andriamanitra nomba azy.
7:10 Ary nanafaka azy tsy ny fahoriana rehetra. Ka dia nomeny azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egypta mbamin'izay rehetra tao an-tranony.
7:11 Avy eo dia nisy mosary nitranga tany rehetra Ejipta sy Kanana, ary ny fahoriana lehibe. Ary ny razantsika tsy nahita sakafo.
7:12 Fa nony nandre Jakoba fa nisy vary tany Ejipta, dia naniraka ny razantsika voalohany.
7:13 Ary amin'ny fotoana faharoa, Joseph dia nahalala ny rahalahiny, sy ny razambeny dia naseho ny Farao.
7:14 Ary Josefa naniraka ka nitondra an'i Jakoba rainy, mbamin'izay rehetra tao mpianakaviny, olona dimy amby fito-polo.
7:15 Ary Jakoba nidina nankany Egypta, ka dia lasa, ary toy izany koa ny razantsika.
7:16 Ary nita ho any Sekema, ka dia napetraka tao amin'ny fasana izay novidin'i Abrahama vola tamin'ny zanak'i Hamora, ny zanak'i Sekema.
7:17 Ary tamin'ny andro ny teny fikasana fa Andriamanitra no efa nanambara tamin'i Abrahama nanatona, ny olona nitombo sy nihamaro teny amin'ny tany Egypta,
7:18 na dia mandra-mpanjaka hafa, izay tsy nahalala an'i Josefa, nitsangana tany Ejipta.
7:19 Ity iray ity, mahafaoka ny havanao, nampahory ny razantsika, ka ho sarona ny zanany madinika, fandrao ho foana velona.
7:20 Dia araka izany fotoana, Mosesy dia teraka. Ary tao ny fahasoavan 'Andriamanitra, ary izy no nitaiza nandritra ny telo volana tao an-tranon'ny rainy.
7:21 Avy eo, rehefa intsony, ny zanakavavin'i Farao naka azy tao, ary izy nanangana azy ho zanany.
7:22 Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Egyptiana. Ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany.
7:23 Ary rehefa efa-polo taona no vita ao aminy, dia nitsangana tao am-pony fa tokony hamangy ny rahalahiny, ny zanak'i Isiraely.
7:24 Ary nony nahita anankiray fijaliana ratra, dia niaro azy. Ary namono ilay Egyptiana, nanao ny famaizana ho azy izay maharitra ny ratsy.
7:25 Ary dia nataony fa ny rahalahiny dia hahatakatra fa Andriamanitra dia hanome azy ireo amin'ny famonjena amin'ny tànany. Fa izy ireo tsy nahafantatra izany.
7:26 Ary tena, amin'ny andro manaraka, dia niseho talohan'ny ireo izay niady hevitra, ary dia ho nampihavana azy ireo soa aman-tsara, nanao hoe:, 'Men, mirahalahy ianareo. Koa nahoana no hanisy ratsy ny hafa?'
7:27 Fa izy no ilay mahatonga ny ratra ho namany nandà azy, nanao hoe:: 'Iza no nanendry anao ho mpanapaka sy mpitsara anay?
7:28 Sao dia mba ta-hamono ahy, Toy izany koa fa ny namonoan'ialahy ilay Egyptiana omaly?'
7:29 Avy eo, amin'izao teny, dia nandositra Mosesy. Ary dia tonga ny vahiny tany amin'ny tany Midiana, izay namoaka roa lahy.
7:30 Ary rehefa efa-polo taona no vita, dia niseho taminy, tany an-efitra ny Tendrombohitra Sinay, anjely, ao anaty lelafo teo amin'ny voaroy.
7:31 Ary rehefa nahita izany, Gaga i Mosesy noho ny fahitana. Ary nony nanatona handinika izy, mba mandinika ny azy, ny feon 'ny Tompo dia nanatona Azy, nanao hoe::
7:32 'Izaho no Andriamanitry ny razanao: ny Andriamanitr'i Abrahama, ny Andriamanitr'i Isaka, ary Andriamanitr'i Jakoba. 'Ary Mosesy, natao ka namaky azy, tsy sahy mijery.
7:33 Fa hoy ny Tompo taminy: 'Hamaha ny kapa amin'ny tongotrao. Fa ny toerana eo izay mitsangana masina tany.
7:34 tokoa, Efa hitako ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany. Ary noho izany, Nidina Aho mba hanafaka azy ireo. Ary ankehitriny, mivoaha ary, fa hirahiko ho any Ejipta. '
7:35 izany Mosesy izany dia, izay nolavin'ny hoe:, 'Iza no nanendry anao ho mpitarika sy mpitsara?'Andriamanitra iray ihany no nirahin'Andriamanitra ho mpanapaka sy Mpanavotra, 'ny tanan' ny Anjely, Ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy.
7:36 No nitondra ny olona nivoaka, hanefa famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egypta, sy teo amin'ny Ranomasina Mena, ary tany an-efitra, efa-polo taona.
7:37 Izany no Mosesy, izay nilaza tamin'ny Zanak'Isiraely: 'Andriamanitra no hanangana ho anareo Mpaminany tahaka ahy avy amin'ny ny rahalahy. Ary mihaino azy. '
7:38 Dia izay teo amin'ny fiangonana tany an-efitra, mbamin'ny Anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay, sy tamin'ny razantsika. Izy no nandray ny tenin'ny fiainana homena antsika.
7:39 Izy no Nefa ny razantsika tsy nety hankatò. Fa tsy, dia nandà azy, ary ao am-pony izy ireo niala an'i Ejipta,
7:40 ka hoy izy tamin'i Arona: 'Manaova andriamanitra ho antsika, izay mety hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny, izay nitondra antsika niala avy tany amin'ny tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjo azy. '
7:41 Koa araka izany ny namboatra ombilahy kely izy tamin'izany andro izany, ary dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy, ka niravoravo tamin'ny asan'ny tànany.
7:42 Fa Andriamanitra nihodina, ary natolony azy ny, mba subservience ny miaramilan 'any an-danitra, araka izay efa voasoratra ao amin'ny Boky + Momba ny Mpaminany: 'Mbola tsy hanatitra ireo niharam-boina sy ny fanatitra ho Ahy efa-polo taona tany an-efitra, Ry mpianakavin 'i Isiraely?
7:43 Ary nefa naka ho anareo ny tranolain'i Moloka sy ny kintan'ny andriamanitra atao hoe Refana, tarehimarika izay niforona ny tenanareo mba mankafy azy ireo. Ary dia toy izany no hitondra anareo ho, ankoatr'i Babylona. '
7:44 Ny trano-lain'ny Vavolombelona tamin'ny razantsika tany an-efitra, araka izay voatendry ho azy ireo, niteny tamin'i Mosesy, ka dia mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany.
7:45 Fa ny razantsika, mandray izany, koa dia nentiny, niaraka tamin'i Josoa, any amin'ny tanin'ny jentilisa, Andriamanitra izay voaroaka teo anoloan'ny razantsika, hatramin'ny andron'i Davida,
7:46 izay nahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra sy izay nangataka mba hahazo ny trano ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
7:47 Fa Solomona kosa no nanao trano ho azy.
7:48 Kanefa ny Avo Indrindra tsy mitoetra ao amin'ny trano naorina-tanana, araka izay nampilazainy ny mpaminany:
7:49 'Ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Ahoana no hanao trano ho ahy? hoy Jehovah. Ary izay no toerana fitsaharako?
7:50 Moa tsy ny tanako nanao izao zavatra rehetra izao?'
7:51 Mafy hatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ve ianao efa manohitra ny Fanahy Masina. Toy ny nataon'ny razanareo ihany, dia tahaka izany koa no ataonao.
7:52 Iza no mpaminany izay tsy enjehina ny razanareo? Ary novonoiny ireo izay nanambara mialoha ny fiavian 'ny Marina. Ary ianao ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono Azy ny azy.
7:53 Nandray ny lalàna noho ny asa ny anjely, nefa ianao tsy nitandrina izany. "
7:54 Avy eo, rehefa nandre ireo zavatra ireo, naratra mafy izy ireo tao am-pony, ary izy ireo fa nihidy vazana tamin'i azy.
7:55 fa, sady feno ny Fanahy Masina, ary nandinika tsara ny lanitra, nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra. Ary hoy izy:, "Indro, Hitako ny lanitra misokatra, ary ny Zanak'olona mitsangana eo an-kavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra. "
7:56 Avy eo izy ireo, niantso tamin'ny feo mahery, voasakana ny sofiny sy ny, niray, Nihazakazaka mafy aminy.
7:57 Ary nandroaka azy ho eny ivelan'ny, any an-dafin'ny tanàna, nitora-bato azy izy ireo. Ary ny vavolombelona nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny tanora, izay atao hoe Saoly.
7:58 Ary raha mbola nitora-bato an'i Stefana, dia niantso ka nanao hoe:, "Tompo Jesosy, raiso ny fanahiko. "
7:59 Avy eo, rehefa nitondra ny lohaliny, dia niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:, "Tompo ô, aza atao ho azy ireo izao ota izao. "Ary rehefa nilaza izany, dia azon'ny torimaso Jesosy ao amin'ny Tompo. Ary Saoly mba nankasitraka ny famonoana.
10:1 Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria, atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny andiana miaramila izay atao hoe Italiana,
10:2 ary mpivavaka tsara, natahotra an'Andriamanitra izy mbamin'ny ankohonany rehetra, manome fiantrana be tamin'ny olona, sy nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva.
10:3 Izany lehilahy anankiray nahita tamin'ny fahitana mazava tsara, amin'ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy ny andro, Ilay Anjelin'Andriamanitra miditra tao aminy ka nanao taminy hoe:: "Kornelio!"
10:4 ary, nandinika azy, dia nosamborin'ny ny tahotra, ka hoy Izy:, "Inona ity, Tompo?"Ary hoy izy taminy:: "Ny vavaka sy ny fiantrana Efa niakatra ho fampahatsiarovana ao amin'ny anatrehan'Andriamanitra.
10:5 Ary ankehitriny, maniraha olona hankany Jopa, ka ampanalao Simona anankiray, izay atao hoe koa Petera.
10:6 Io lehilahy io hiantrano amin'izay amin'i Simona, mpanao hoditra, ny tranony eo anilan'i-dranomasina. Fa izy hanambara aminao izay tokony hataonao. "
10:7 Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny Azy efa lasa, dia niantso, avy ireo izay hanaiky Azy, roa lahy tamin'ny mpanompony sy ny miaramila izay natahotra ny Tompo.
10:8 Ary rehefa nanazava ny zava-drehetra ho azy ireo, dia naniraka azy hankany Jopa izy.
10:9 Avy eo, amin'ny andro manaraka, raha mbola nanao ny dia sy nanakaiky ny tanàna, Petera niakatra tany amin'ny efi-trano ambony, ka mba hivavaka, amin'ny tokony ho tamin'ny ora fahenina.
10:10 Ary satria noana izy, dia te-hahazo sakafo. Avy eo, raha mbola nanomana azy io, dia azon-tsindrimandry-tsaina nanarona azy.
10:11 Ary nahita ny lanitra misokatra, ary nisy zavatra midina, toy ny lamba rongony lehibe dia nampidininy teo, tamin'ny zorony efatra, avy any an-danitra teto an-tany,
10:12 izay rehetra manan-tongotra efatra biby, ary ny zava-mandady ny tany sy ny zava-manidina eny amin'ny rivotra.
10:13 Ary nisy feo nanao taminy: "Mitsangàna, Peter! Vonoy, ka hano. "
10:14 Fa hoy Petera:: "Sanatria amiko, Tompo. Fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio. "
10:15 Ary ny feo, indray fanindroany ho azy: "Izay efa nodiovina, dia tsy mba hataonao fady. "
10:16 Ankehitriny dia izany intelo no nanaovana. Ary niaraka tamin'izay ny fitoeran-javatra nakarina any an-danitra.
10:17 Ary raha mbola nisalasala i Petera tao am-pony tahaka ny inona ny fahitana, izay efa hitany, mety hoe, indro, ny olona izay efa nirahin'i Kornelio nijanona teo am-bavahady, nanontany ny tranon'i Simona.
10:18 Ary nony efa niantso, izy ireo nanontany raha Simon, izay atao hoe koa Petera, dia hivahiny ao amin'io toerana io.
10:19 Avy eo, i Petera dia nieritreritra momba ny fahitana, hoy ny Fanahy taminy, "Indro, misy telo lahy mitady anao.
10:20 Ary noho izany, mitsangana, midina, ary mandehana miaraka aminy, aza misalasala. Fa Izaho no naniraka azy. "
10:21 Ary Petera, nidina tany amin'ireo olona, nanao hoe:: "Indro, Izaho no olona izay mitady. Inona no antony izay efa tonga?"
10:22 Ary hoy izy ireo:: "Kornelio, kapiteny, marina sy matahotra an'Andriamanitra ny olona, izay manana fijoroana ho vavolombelona tsara avy any amin'ny firenena rehetra 'ny Jiosy, Nahazo hafatra avy amin'ny anjely masina mba hiantso anao any an-tranony sy hihaino teny avy aminao. "
10:23 Noho izany, nitarika azy ireo amin'ny, Izy nandray azy toy ny vahiny. Avy eo, amin'ny fanarahana ny andro, eny, nifoha, dia niainga aminy. Ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy.
10:24 Ary amin'ny andro manaraka, dia niditra tao Kaisaria. Ary tena, Kornelio niandry azy, dia nampiangona ny fianakaviany sy ny namany akaiky indrindra.
10:25 Ary nony fa, rehefa Petera niditra, Kornelio dia nandeha nitsena azy. Ary lavo teo an-tongony, izy ka hajaina.
10:26 Na izany aza tena, Peter, manainga azy, nanao hoe:: "Mitsangàna, Fa izaho koa mba lehilahy ihany. "
10:27 Ary niresaka taminy, dia niditra tao, Ary nahita olona maro izay nivory.
10:28 Ary hoy Izy taminy:: "Fantatrao fahavetavetana dia ho an'ny Jiosy ny olona mba hikambana amin'ny, na mba hanampy ho, any amin'ny firenena hafa. Fa Andriamanitra efa nanambara tamiko mba hiantso olona hoe fady na tsy madio.
10:29 Noho izany ary tsy isalasalana, Tonga aho rehefa antsoina. Noho izany, Manontany anao aho, Nahoana no niantso ahy ianao?"
10:30 Dia hoy Kornelio: "Tsy izao andro fahefatra, ho 'izao ora izao, satria aho nivavaka teto an-tranoko tamin'ny ora fahasivy, ary indro, nisy lehilahy nitsangana teto anatrehako fotsy vestment, ka hoy Izy::
10:31 'Kornelio, ny vavaka efa re sy ny fiantrana efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra.
10:32 Noho izany, maniraha hankany Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera. Io lehilahy io no hivahiny ao an-tranon'i Simona, mpanao hoditra, amoron-dranomasina. '
10:33 Ary noho izany, Avy hatrany dia naniraka ho anao. Ary nataonao tonga soa eto. Noho izany, isika rehetra izao ankehitriny eo imasonao mba hihaino izay rehetra izay nampianarina ho anareo ny Tompo. "
10:34 Avy eo, Peter, manokatra ny vavany, nanao hoe:: "Efa nanatsoaka hevitra amin'ny fahamarinana fa Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona.
10:35 Fa ao anatin'ny firenena rehetra, na iza na iza matahotra Azy ka manao ny rariny no ankasitrahany.
10:36 Andriamanitra dia naniraka ny Teny ho any amin'ny zanak'i Israely, nanambara ny fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa Izy no Tompon'izao rehetra.
10:37 Fantatrao fa ny Teny natao fantatra eran'i Jodia. Fa nanomboka hatrany Galilia, aorian'ny batisa izay notorin'i Jaona,,
10:38 Jesosy avy any Nazareta, Andriamanitra izay voahosotra tamin'ny Fanahy Masina sy ny hery, Nandeha manodidina nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly. Fa Andriamanitra nomba azy.
10:39 Ary izahay no vavolombelon'ny rehetra izay nataony tany amin'ny faritr'i Jodia ary tany Jerosalema, va Ilay novonoin'ny tananareo nahantonareo teo amin'ny hazo.
10:40 Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny andro fahatelo, ary namela azy ho haseho,
10:41 tsy tamin'ny olona rehetra, fa ny vavolombelona preordained Andriamanitra, ho an'ireo amintsika izay niara-nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin'ny maty.
10:42 Ary Izy nandidy anay hitory amin'ny olona, ka hanambara fa Izy no Ilay efa voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty.
10:43 Izy rehetra manolotra fijoroana ho vavolombelona ny mpaminany fa amin'ny anarany izay rehetra mino Azy mandray ny famelan-keloka. "
10:44 Raha Petera mbola nilaza izany teny izany, ny Fanahy Masina nilatsaka rehetra ireo izay nihaino ny Teny.
10:45 Ary ny mpino ny amin'ny famorana, izay tonga niaraka tamin'i Petera, dia talanjona fa ny fahasoavan'ny Fanahy Masina ihany koa naidiny teo amin 'ny Jentilisa.
10:46 Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy.
10:47 Ary Petera namaly, "Ahoana no mety misy mandrara ny rano, ka dia ireo izay efa nandray ny Fanahy Masina dia tsy hatao batisa, tahaka antsika koa efa?"
10:48 Dia nasain'i Jesosy mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Avy eo dia nangataka Azy hitoetra tao aminy nandritra ny andro.